सन्दीप आबद्ध दिल्लीको पहिलो खेल भोलि हुने, सन्दीप खेल्ने सम्भावना कति ? |
सन्दीप आबद्ध दिल्लीको पहिलो खेल भोलि हुने, सन्दीप खेल्ने सम्भावना कति ?
२०७७, ३ आश्विन शनिबार १६:३६ September 19, 2020 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १३ औँ संस्करण आजबाट यूएईमा शुरु हुँदैछ । अघिल्लो संस्करणको विजेता मुम्बई इन्डियन्स र चेन्नई सुपर किङ्सबीच अबुधाबीमा पहिलो खेल हुनेछ । आईपीएलको इतिहासमा चौँथो पटक यी दुई टीम उद्घाटन खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् ।
यसअघि भएका तीन उद्घाटन खेलमध्ये दुई वटामा मुम्बई र एउटामा चेन्नई विजयी भएका थिए । आज हुने खेल नेपाली समय अनुसार साँझ ७ : ४५ मा शुरु हुनेछ । नेपाली युवा स्पीनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्सको पहिलो खेल भोलि छ ।
दिल्लीले भोलि हुने खेलमा नेपाली समय अनुसार साँझ ७:४५ बजे किङ्स इलेभेन पन्जाबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेलेर ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोबाट सन्दीप आईपीएल खेल्न यूएई पुगिसकेका छन् ।
दिल्लीको क्याप्टेन श्रेयस ऐयर छन् । टीममा शिखर धवन, अजिन्क्या रहाने, अक्षर पटेल, रिसभ पन्त, कागिसो राबाडा, अमित मिश्रा, रविचन्द्र आश्विन लगायत खेलाडी छन् । आईपीएल १० नोभेम्बरसम्म चल्नेछ । ५३ दिनमा आठ टीमले कम्तीमा १४:१४ खेल खेल्नेछन् । एक लिमिनेटर, एक क्वालिफायर र फाइनलसमेत गरी ६० खेल हुनेछन् । यी खेल दुबई, अबुधाबी र शारजाहमा हुनेछ ।